सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बोलाएर प्रचण्ड लागे बालुवाटार ! – yuwa Awaj
सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बोलाएर प्रचण्ड लागे बालुवाटार !
कार्तिक २५, २०७७ मंगलबार 8
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बोलाएका छन् । प्रचण्डले मंगलबार अपरान्ह चार बजे पार्टी कार्यालयमा अनौपचारिक बैठक बोलाएका हुन् ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अनौपचारिक छलफलका लागि सचिवालय सदस्यहरुलाई बोलाइएको जानकारी दिए । यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डसहितका ५ जना नेताले सचिवालय बैठक बोलाउन सहमति दिन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित आग्रह गरेका थिए । शुक्रबार र शनिबार अनौपचारिक छलफल गरेर सोमबारभित्र
बैठक बोलाउन ५ न्ताले गरेको आग्रहलाई ओलीले वेवास्ता गरेपछि मंगलबार पुन प्रचण्डले सचिवालय सदस्यहरुसँग छलफल गर्न लागेका हुन् । यसैबीच अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमनत्री समेत रहेका ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन् । ओलीसँगको भेटवार्ता सकेर धुम्वाराही पुग्ने प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।
ओली भेट्न बालुवाटार पुगे प्रचण्ड !
काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटघाट भएको छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि ओली प्रचण्डबीच गत आइतवार भेटघाट भएको थियो । प्रचण्डले पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधानका लागि सचिवालय बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेका छन् । भने ओली बिना एजेण्डा सचिवालय बैठक नबोलाउने अडानमा रहेका छन् ।
Prev१ करोड आप्रवासीलाई अमेरिकी नागरिकता दिने बाईडेनको तयारी…हेर्नुहोस् ।
Nextअभिनेत्री झरना थापा, पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र अर्बपति विनोद चौधरी पनि कर नतिर्नेको सूचिमा…हेर्नुहोस् ।
नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी हुन नरभाणे नेपाल आएपछि मनिषा कोइरालाले दिइन् यस्तो प्रतिक्रिया…हेर्नुहोस् ।
यस्तो छ सुजुकी बर्गमन स्ट्रिट २०० को विशेषता
अत्ति भो अब ओलीलाई साथ दिन सक्दैनौं – हरिबाेल गजुरेल…हेर्नुहोस् ।
श्वेता खड्का भन्नुहुन्छ : एक्लै जीवन काट्न सकिँदैन रहेछ, के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णयलाई स्विकार गर्ला ?
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1290)
असार १ गतेदेखि उपत्यकाभित्र के-के खोल्न पाइन्छ ? (539)
मेलम्ची बजारमा घरको छतमा मानिसहरु फसे, उद्दारमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर (414)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1290)
४.	असार १ गतेदेखि उपत्यकाभित्र के-के खोल्न पाइन्छ ? (539)
५.	मेलम्ची बजारमा घरको छतमा मानिसहरु फसे, उद्दारमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर (414)